अब ४० प्रतिशत उपभोग गर्ने मिति सकिएका वस्तु आयात गर्न खुल्ला
काठमाडौं । तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने नीतिबाट पछि हटेको सरकार उपभोग्य वस्तुको आयातमा पनि लचिलो भएको छ। असार २ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ७५ प्रतिशत उपभोग्य मिति बाँकी भएका..
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–१० पलाँसेमा सञ्चालित काठमाडौँ फन भ्याली कम्पनीले लाखौँ रुपैयाको कर छली गरेको पाइएको छ । कम्पनीको नाममा बिल काट्नुपर्नेमा नक्कली बिल काटेर कर छली गरेको पाइएको हो..
भारतीयलाई आकर्षित गर्न क्यासिनोमा नयाँ नियम
काठमाडौं । सरकारले नेपालको सिमानाको तीन किलोमिटरमा क्यासिनो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि क्यासिनो नियमावली २०७० मा विदेशी सिमानाको ५ किलोमिटरभित्र मात्रै क्यासिनो खोल्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै..
१० हजार ५ सयमा कार, ३ हजार रुपैयाँमा मोटरसाइकल विक्री हुँदै
काठमाडौं । सस्तोमा सवारी साधन खरिदका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईका लागि सुवर्ण अवसर आएको छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयले ३४१ थान मोटरसाइकल, जिप, कार बोलेरो, सुमो भ्यानलगायतका..
किन बढ्यो सुनको मुल्य १ महिना मै ६ हजार रुपैयाँले, बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । अघिल्लो तीन दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य मंगलबार पुन उकालो लागेर नयाँ उचाईमा पुगेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेर ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ..
काठमाडौं । देशैभरी सञ्चालित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द भएका छन् । प्रस्तावित टेलिभिजन विज्ञापन ऐन २०७६ को विरुद्धमा टेलिभिजन च्यान प्रदायक कम्पनीहरु आन्दोलनमा उत्रदै २४ घण्टाका लागि सबै विदेशी च्यानहरु..
दिन दिनै १००० रुपैयाँले बढ्यो सुन, पुग्यो हालसम्मकै उच्चमुल्यमा
काठमाडौं । सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ६४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज १ हजार रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएका छ। ..
मेगा बैंकले किराना पसल चलाउनेलाई क्यूआर कोडबाट भुक्तानी लिएमा महिनाको ५ हजार दिने
काठमाडौँ । मेगा बैंकले किराना व्यवसायीहरुका लागी आकर्षक अफर ल्याएको छ । बैंकिङ कारोबारलाई ‘क्यासलेस’ बनाउने उद्देश्यका साथ बैंकले क्यूआर कोड प्रवद्र्धन गर्न किराना व्यवसायीहरुका लागि आकर्षक अफर ल्याएको जनाएको..
सुनको भाउ एकै दिनमा एक हजार रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको भाउ एक हजारले बढेको छ । बुधबार तोलामा ६३ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ बिहीबार बढेर ६४ हजारमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले..
रेडबुल लगायत इनर्जी ड्रिंकको आयातमा प्रतिबन्ध, चामलको निकासी खुल्यो
काठमाडौं । सरकारले रेडबुल लगायतका इनर्जी ड्रिक्सको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले क्याफिनयुक्त शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ र यस्तै प्रकारका पेय पदार्थको आयातमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ..
नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम सकियो, कहिलेदेखि आउलाँ तेल पाइपमा ?
वीरगंज। नेपाल–भारत दुवै देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमीनमुनि ओछ्याउने काम सकिएको छ। भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन बिछ्याउने काम पूर्णरुपमा..
पेट्रोल र डिजेल र मटितेलको मूल्य घट्यो, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएको छ । सबै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य घटाइएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । जसअनुसार काठमाडौंको..
सुनको मूल्य बढेको बढै, बजेटपछि नै ३ हजार ५ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ६२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज ६ सय रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले..
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो, कति बढ्यो
बाँके । बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने राप्तीपारीका सीमावर्ती गाउँ दुई वर्ष अघिसम्म ‘नेपाली नोट नचल्ने’ ठाउँका रुपमा परिचित थिए। हुन पनि ती गाउँमा नेपाली नोट विरलै साटिन्थे।विभिन्‍न कामको सिलसिलामा राप्तीपारिको..
आज नयाँ दिल्ली जान लागेको जहाजमा पाइलटले सिस्टम अन गर्न बिर्सेपछि.........
काठमाडौं । आइतबार बिहान आठ बजे नेपाल एयरलाइन्सको उडान नम्बर २०५। एयरबस ३२०–२०० जहाज काठमाडौंबाट भारतको नयाँ दिल्ली जाने तालिका थियो। जहाज सबै तयारी पूरा गरी ट्याक्सी वेमा पुग्यो। तर..
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि कसरी तेल बेचिरहेको छ इरान ? निर्यातमा ५० प्रतिशत कमी
तेहरान। अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि इरानले आफ्नो तेल उत्पादनलाई निर्यात गरिरहेको बताएको छ। “अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा विभिन्न मुलुक डराएपछि इरानले आफ्नो उत्पादनलाई ‘फरक ढङ्ग’ ले बजारमा पठाइरहेको छ,”..
सुनको मुल्य २८ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । यो साता सुन प्रतितोला २८ सयले महंगिएको छ। साताको पहिलो दिन ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा करोबार भएको सुनको मूल्य आज ६२ हजार ३ सय रुपैयााँ पुगेको नेपाल..
आजदेखि घट्यो पेट्रोलको मूल्य, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले घटाएर ११० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । पेट्रोलबाहेक अन्यको मूल्य..
Posted on Jun 02 2019
काठमाडौं । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)मा क्रेता र बिक्रेता दुवैले ५० प्रतिशत तिनुपर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायी ठेकेदारलाई मात्र लागु हुने भएको छ । अहिलेसम्म सामान बिक्रीगर्दा क्रेताले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने..
बजेटपछि कार र मोटरसाइकलको सडक कर कति पर्छ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले आयात हुने सवारीसाधनमा प्यासेन्जर कारमा मूल्यको १० प्रतिशत र मोटरसाइकलमा २ लाख रुपैयाँसम्म सडक निर्माण दस्तुर कायम गरेको छ । २ हजार सीसीसम्म इन्जिन क्षमता भएका कार, जीप..
किन बढ्यो ? २ दिनमै २ हजार रुपैयाँले सुनको मूल्य
काठमाडौं । बिहीबार प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सुक्रबार १५ सय रुपैयाँ बढी ६१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भयो। शुक्रबार प्रतितोला ६१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज..
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले ल्याउने काँचो सुन तथा सुनको गहनाको परिणाम बढाएको छ । अब भन्सार तिरेर २५ तोलासम्म सुनका गहना र एक सय ग्राम काँचो सुन ल्याउन..
२० लाखसम्म कारोबार देखाई व्यापार व्यवसाय गरेकालाई कर बढ्यो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खत्तिवडाले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरको बजेटले साना व्यापार व्यवसाय गरेकालाई कर बढाईदिएको छ । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भई वार्षिक २ लाखसम्म आय गर्ने साना करदाताको..
काठमाडौं । राजश्व चुहावट रोक्न सरकारले दण्ड र जरिवाना बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा २४०० प्रतिशतसम्मले जरिवाना बढाइएको छ । राजस्व..
बजेटको प्रभाव आजैदेखि पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मुल्य बढ्यो, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं। बजेटमा प्रदुषण कर बढाएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर थप एक रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क लगाउने..
भारतले पूर्वी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर नेपाल भित्रिन लागेका ७३ ट्याङ्करलाई पश्चिम बङ्गालको पानीट्याङ्की भन्सारमा रोकेपछि पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । अनलाइन माध्यमबाट भन्सार ‘इन्ट्री सिस्टम’ शुरु गरिएको..
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिकः के–के मा कति भयो प्रगति ?
काठमाडौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन । आर्थिक..
काठमाडौं । एक चिनियाँ महिलाले नयाँ कार किन्नका लागि ६६ वटा ब्यागमा सिक्का लिएर आएपछि बिक्री गर्ने कक्षका कर्मचारीको बोलीनै फुटेन । तीन पटकको भारी बोकाइपछि हेबेइ प्रान्तकी महिलाले फक्सवागनको १..
अब भन्सार कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक..
Results 889: You are at page3of 30